कसरी भत्कियो भक्तपुरमा नेकपाको गढ ?
भक्तपुरको प्रदेश सभा सदस्यको उपचुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार विजयी हुँदा नेकपा नेताहरूले त्यसलाई अनपेक्षित परिणामको रूपमा लिएका छन्। काङ्ग्रेस उम्मेदवार कृष्णलाल भडेलले सत्तापक्षका नेकपा उम्मेदवार डिपी ढकाललाई परास्त गरेका हुन्। यसअघि उक्त निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) मा नेकपाका उम्मेदवार हरिशरण लामिछाने विजयी भएका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमालेका लामिछानेको निधनपछि उपचुनाव भएको हो। अघिल्लो चुनावमा पनि सुरुमा तत्कालीन माओवादीका ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भएको तर चर्को विवादपछि अन्तत: लामिछाने नै नेकपा उम्मेदवार बनाइएको बताइएको थियो। त्यसबारे पनि तत्कालीन एमाले र पूर्वमाओवादीको फरक-फरक मत छ। पूर्वएमाले पक्षले ढकालले विद्रोही उम्मेदवारी दिएर पछि फिर्ता लिएको बताउने गरेको छ। तत्कालीन माओवादी नेताहरूले भने ढकालनै आधिकारीक उम्मेदवार रहेको तर विवाद बढ्न नदिन उनले लामिछानेलाई समर्थन गरेको बताउने गरेका छन्। यसपटक पनि उम्मेदवार छनौट विवादपूर्ण बन्न पुगेको थियो। तत्कालीन माओवादीबाट ढकाललाई उम्मेदवार बनाउँदा तत्कालीन एमाले पक्षधरले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए। स्वर्गीय हरिशरण लामिछानेकी पत्नीसहित पूर्वएमालेका कैयौँ नेताहरू उम्मेदवारको दौडमा रहेका बताइएको थियो। तर पार्टी निर्णयमा अडिग रह्यो। कतिपयले उम्मेदवार छनौटमामा पार्टीले स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूको भावना कदर गर्न नसक्दा चुनावमा पछि परेको ठानेका छन्।
'अनपेक्षित' परिणाम कसरी ?
आफ्नो हारलाई डिपी ढकालले अपेक्षित मानेका छैनन्। तर उनले विगतको विवादलाई हारको कारण मानेका छैनन्। चुनावी परिणामपछि उनले भने, "सुरुमा केही असर पर्छ कि भन्ने आकलन थियो।" "तर त्यसको खासै असर पछिसम्म बाँकी रहेन। पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ता पङ्क्ति मूलरूपमा एक थियो।" उनले राप्रपा (संयुक्त) र केही स्थानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई साथ दिएको बताए। ढकालले भने, "चुनावको पछिल्लो चरणमा सत्तापक्षीय दलविरुद्ध जसरी विपक्षी दलहरूको गठबन्धन बन्यो, त्यसलाई समयमै निस्तेज पार्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम आएन।" तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट नेकपा भक्तपुरका ईन्चार्ज दिलीप प्रजापतिले पनि हारको मुख्य कारण त्यसलाई नै मानेका छन्। तर काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अघिल्लो चुनावमा भन्दा बढी मत ल्याए पनि नेकपा उम्मेदवारको मत विगतभन्दा घटेको छ।
भक्तपुरका सांसद् एवम् नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतका बुझाइमा पार्टी उम्मेदवार पछि पर्नुका दुई मुख्य कारण यस्ता छन्:
"पार्टी एकता प्रक्रिया ढिलो भएको कारणले गर्दा तल्लो तहसम्म पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको एकताको प्रभाव दिन नसक्नु।"
"उम्मेदवारका विरुद्ध पनि व्यक्तिगत खालका गुनासोहरू रहे। जिल्लाका होइनन्, माओवादी पृष्ठभूमिजस्ता कुराहरू उठाइयो। कार्यकर्ता तहमा त्यो गुनासो साम्य पार्‍यौँ तर जनताको तहमा रहेको त्यो भावना भत्काउन नसक्दा चुनावी परिणाम अनुकूल हुन नसकेको हो।" नेकपा भक्तपुरमा एकतापछि पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने भावना कायम रहेको उनको भनाइबाट बुझिन्छ।
कस्तो असर पर्ला ?
निर्वाचनको यस्तो परिणाम दुई दल एक भएर नेकपा बनिसके पनि एमाले र माओवादी भन्ने भावना अझै मेटिएको छैन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको ठानिएको छ। तर नेकपा भक्तपुरका ईन्चार्ज प्रजापतिले भने, "अलिकति त्यो पनि हुनसक्ला तर मुख्य कारण त्यो होइन।" पूर्वमन्त्री बस्नेत प्रधानमन्त्री निकट नेता हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर भक्तपुर जिल्लामै छ। त्यसैले उक्त उपचुनावको नतिजालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिने छ। र, पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा त्यसले एक खालको असन्तुष्टि र सन्देह बढाउन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ। तर अर्काथरीले चुनावमा यस्ता घात-अन्तर्घात र असन्तुष्टि सामान्य जस्तै भइसकेकाले नेकपाभित्र त्यसले ठूलै महत्त्व नपाउने विश्लेषण गर्छन्। जसले जे तर्क गरेपनि टिकट वितरणपश्चात उत्पन्न विवादनै हारको प्रमुख कारण हो, यसमा पुर्व माओबादी र पुर्व एमाले भन्ने संकीर्ण मनोभावले काम गरेको पुर्व माओबादीको विश्लेषण रहेको छ !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा पराजित नेकपाका उम्मेद्वार डीपी ढकालले मत दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । ढकालले आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उपनिर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई हार्दिक बधाई दिँदै सूर्य चिन्हृमा मतदान गर्ने सबैलाई आभार व्यक्त गरेका हुन् । भक्तपुरमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णलाल भंडेल विजयी भएका छन् । ढकालले लेखेका छन्, ‘यो निर्वाचनमा परिचालित हुने सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भक्तपुरको विकास र समृद्धिका लागि आदरणीय जनसमुदायको सुख दुःखको साथी भई आजिवन लागिपर्ने पुनः प्रतिज्ञा गर्दछु ।’